Ukufundwa kwamanye amazwe Ukulungiselela: Indlela eQinisekisiweyo yoGuqulelo enokuthi isuse imiqobo kuLwimi 2022
Julayi 17, 2021 SAN
Ke ucwangcisa ukufunda phesheya. Unendawo ekujoliswe kuyo, ikhosi ekujoliswe kuyo yokufunda kunye namaxwebhu akho alungile. Kodwa ubethe ingxaki enye: amaxwebhu akho onke abhalwe ngesiNgesi saseCanada kwaye awazi igama lolwimi lwendawo oya kuyo. Kule meko, uza kwenza ntoni? Unenkqubo yesicelo esingqongqo ekufuneka ujongane nayo, kunye nenkqubo yokungena kwelinye ilizwe ngokulinganayo.
Umkhenkethi ohambela kwelinye ilizwe yenye into, kodwa umfundi oza kufunda phesheya unyaka okanye nangaphezulu unokufuna i-visa, amaxwebhu ezonyango, izatifikethi zokuzalwa, amaphepha asemthethweni nokunye. Ingaba ngumsebenzi onzima kumfundi.
Nangona kunjalo, njengoko siza kubona kweli nqaku, ukuguqulela akufuneki kube nzima, ngakumbi inguqulelo eqinisekisiweyo. Ngoncedo lwabaguquleli abaqinisekisiweyo kunye neenkonzo zokuguqulela eziqinisekisiweyo, kunokwenzeka ukuba ungene kwilizwe lakho lamaphupha kunye nesikolo sokuphupha.
Imiqobo yoLwimi ejongene nabaFundi abafuna ukuFunda kwelinye ilizwe
Inguqulelo eQinisekisiweyo ingasombulula njani kwiZithintelo zoLwimi kuFundo lwaManye amazwe
Ukubaluleka koMguquleli oQinisekisiweyo
Inguqulelo eqinisekisiweyo kulungiselelo lwelinye ilizwe
Abafundi baseCanada abafuna ukufunda phesheya banokuhlangabezana nobunzima apha endleleni. Eyona nto iphambili kobo bunzima yimpembelelo yezithintelo kulwimi. Ulwimi yinxalenye ebaluleke kakhulu yokufunda phesheya- ezinye izikolo ziya kufuna ukuba abafundi bavavanye okanye bathathe izifundo ngolwimi lwabo, njengenxalenye yesifundo sabo sangaphandle.
Ngokubanzi, ukufunda kwelinye ilizwe kwilizwe elingathethi isiNgesi saseCanada lithuba lakho lokuntywilisela kolunye ulwimi. Ukuba ungene kwisikolo, unokujonga ekukhetheni ulwimi olusisiseko.
Ukuba ikhosi yakho yokufunda ifuna ukuba uhlale kwilizwe lakho elisingathiweyo ixesha elingaphezulu konyaka, unokufuna ukuthathela ingqalelo izinto zasekhaya, isigama sasekhaya, ukubiza amagama kunye nesilayidi. Zonke ezi zinto zinokubangela ukuba utyibilike. Ukuba uyazazi ezi zinto, izakhono zakho zonxibelelwano ziya kuthi kungekudala uthethe okomthonyama.
Ngelixa awunyanzelekanga ukuba utyibilike ngaphambi kokuba ufunde kwelinye ilizwe, uya kukhuthazwa ukuba ufunde uninzi lolwimi olunqwenelekayo ngaphambi kokuba uhambe. Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka woyise imiqobo yolwimi ehambelana nendawo oya kuyo.
Eyokuqala yale miqobo yolwimi oza kudibana nayo inento yokwenza namaxwebhu kuya kufuneka ulungiselele indawo oya kuyo.
Uguqulelo oluqinisekisiweyo lusombulula njani imiqobo yolwimi? Ngaphambi kokuba ungene esikolweni ozikhethele sona, kuya kufuneka ufake isicelo. Owona mqobo wokuqala kwaye ngowona mkhulu uya kujongana nawo kukuguqulela amaxwebhu anje ngala:
Ukuqala kwakhona kunye neeCV
Amaphepha okufudukela kwelinye ilizwe
Iyunivesithi oyifunayo iya kufuna iikopi zala maxwebhu, aguqulelwe kakuhle kulwimi olufunwayo. Ungayenza njani lonto ukuba awulwazi ulwimi?
Iinkonzo zoguqulo eziqinisekisiweyo ziya kuthi qinisekisa uxwebhu oluguqulelweyo ngokuchanekileyo nangokuthembeka Kwisiqobo. Oku kunokusetyenziselwa amaziko afana neeyunivesithi, kunye namaqumrhu karhulumente welizwe lakho elifunayo.
Ukuba ucwangcisa ukufundisisa kwelinye ilizwe, uya kudibana nemiceli mngeni ephambi kwakho. Ngelixa ufaka isicelo, kuya kufuneka ubonelele ngeediploma zakho, izincoko zokwamkelwa, ukuqhubeka kwakhona kunye neeCV, kunye neeleta zesalathiso kulwimi lweli.
Ngelixa useluhambeni, kuya kufuneka ubonelele ngesigunyaziso sokuhamba, iifom zonyango, kunye namaphepha okufudukela kwisikhululo seenqwelomoya naxa ufika. Ungayihamba njani imiqobo yolwimi kula maxwebhu? Ngokusebenzisa iinguqulelo eziqinisekisiweyo, ewe.
Ukungena kwisikolo sakho sokhetho ngekhe kwenzeke ngaphandle komguquleli oqinisekisiweyo. Inguqulelo encinci okanye impazamo inokubiza ukuba wamkelwe.
Ngaphandle kokuguqulela ngokuchanekileyo amaxwebhu akho, umguquli oqinisekisiweyo uya kukunceda ekulungiseleleni la maxwebhu. Kwaye banokuqinisekisa ukuba iinguqulelo zakho zifomathiwe ngokuchanekileyo kwiimfuno ezisemgangathweni zeziko lakho lokukhetha.
Umzekelo, inkqubo yokuhlela eAsia, eyahlukileyo kumazwe ahlukeneyo eAsia, iyahluka ukusuka kwinkqubo yokubamba yase-US, esebenzisa isikali esingu-4.0. Iinkonzo zoguqulo eziqinisekisiweyo ziya kuqinisekisa ukuba unenkqubo efanelekileyo yokuhlela eguqulweyo kwimibhalo yakho. Ngaphandle kweenguqulelo eziqinisekisiweyo, unokuba uthumela ibanga eliphezulu esiphelweni sakho kwaye isikolo sinokubona amanqanaba asezantsi esiphelweni sabo.
Xa kuziwa kufuduko, usenokungakwazi ukufikelela kwindawo oya kuyo ngaphandle kwe amaxwebhu afanelekileyo iyafuneka, kuguqulo. Oku kubandakanya iipaspoti, amaxwebhu okuhamba, kunye namaphepha okufudukela kwelinye ilizwe. Ukuqala ukufumana ezi fom, kuya kufuneka unikezele ngesiqinisekiso sokuzalwa kunye / okanye ubungqina bokuba ngumhlali kwilizwe lakho kunye / okanye ileta yokwamkela evela esikolweni sakho phesheya. Onke la maxwebhu kufuneka aguqulelwe ngokufanelekileyo, kuguqulelo oluqinisekisiweyo. Qiniseka ukuba ujonga kwisikolo sakho sasekhaya into oyifunayo kuhambo lwaphesheya.
Iinguqulelo eziqinisekisiweyo, ekukuphela kweenguqulelo ezamkelweyo kulo mzekelo, ziya kufuneka. Kungenxa yokuba iinguqulelo eziqinisekisiweyo ziqinisekisa inqanaba eliphezulu lokuchaneka kumsebenzi wokuguqulela.
Isazi solwimi esiqinisekisiweyo kulwimi olukhethileyo sinokuqinisekisa ukuba inguqulelo yakho iya kwamkelwa liziko lakho lemfundo kunye norhulumente welizwe ekujoliswe kulo, kuba zonke iinguqulelo eziqinisekisiweyo zamkelwe ngokwamkelwa ziinkonzo zoguqulo eziqinisekisiweyo. Musa ukuhlala phantsi.
Iinkonzo zokuguqulela eziqinisekisiweyo ziya kuyisusa imiqobo yolwimi enxulunyaniswa nokwenza isicelo sesikolo sakho naxa sowuza kuhamba. Isitshixo kwisifundo esihle sokulungiselela phesheya, ngakumbi ukuba isikolo sakho sokuphupha sinobuchule obuphantsi besiNgesi.
Ukuba ufunda kwelinye ilizwe, ayisiyomabanga nje kuphela abalayo- kodwa kunye neenguqulelo eziqinisekileyo. Ziya kuba ngumqolo kumaxwebhu akho, kwaye ziya kubonelela ngokufanelekileyo uxwebhu lwantlandlolo oluya kwamkeleka kumaziko ofuna ukuthumela kuwo
Qiniseka ukuba wenza uphando olwaneleyo ukulungiselela ukufundisisa kwelinye ilizwe, ukuze ube nazo zonke iimfuno ezilungele ngaphambi kokuba ufikelele kumaxwebhu aguqulelwe kwiinkonzo zakho zokuguqulela eziqinisekisiweyo.
Izibonelelo zeNkqubo yokuFunda kwelinye ilizwe
Izibonelelo zasimahla ezikwi-Intanethi ezinokuthi zifunwe ngumfundi oceba ukufundisisa phesheya
Post Previous:Amagama angama-30 apholileyo aqala ngo-A
Okulandelayo Post:Iposi leCovid-19: Amacandelo aDumileyo aza kuba kwiMfuno ePhakamileyo